ဂျူနီယာဝင်း – အောင်ချမ်းသာပုံပြင် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျူနီယာဝင်း – အောင်ချမ်းသာပုံပြင်
ရန်ကုန်ကလူတွေကတော့ လှည်းတန်းဟူသောအမည်က စိမ်းမနေပါ။ နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးလုို လှည်းတန်းဘတ်စကားဂိတ်၊ လှည်းတန်း ဈေး၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊ လှည်းတန်းရပ်ကွက် စသည့်ဖြင့် ပြောဆုိုသုံးနှုန်းနေကြပါသည်။ လှည်းတန်းဆိုတာ အလွန်ကျယ်ပြန့်သောနေရာ – ရန်ကုန်တက္ကသုိုလ်ပင်မနှင့်နီးသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အဲသည် လှည်းတန်းဆုိုသော နေရာကျယ်ကြီးမှာ “အောင်ချမ်းသာ” ဟု ခေါ်တွင်သည့် နေထုိုင်သူ ရာဂဏန်း အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့်နေထုိုင်သော၊ သူတုို့၏ဘ၀များက အေးချမ်းအေးဆေးစွာ နေထုိုင်နေကြသော ရပ် ကွက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်မတုို့နေထုိုင်ကြတာက အဲသည်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်နှင့် နီးပါသည်။ အဲသည်နေရာကုို မိနစ် ၂၀ ခန့် လမ်း လျှောက်သွားရင် ရောက်ပါပြီ။ ယခုထုိုလှည်းတန်းမှာရှိခဲ့သော “အောင်ချမ်းသာ” ဟူသော ရပ်ကွက်လေးအကြောင်း – ကျွန်မကုို ယခုတုိုင် နွေးထွေးနေဆဲအတိတ်က အရိပ်ဟောင်းများ – ဟောင်းသွားသော်လည်း ကျွန်မအတွက်တော့ အသစ်ဖြစ်နေဆဲ အဲသည် အောင်ချမ်းသာပုံပြင်လေးကုိုပြောပါမည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဂျုနီယာဝင်း, ပင်တိုင်ကဏ္ဍ
One Response to ဂျူနီယာဝင်း – အောင်ချမ်းသာပုံပြင်
Htwe Paing on April 14, 2014 at 11:46 am
I can under the feeling. That is same as us, they ” military and Khind Nyunt took our place and made it as 8 Mile Junction 8 centre. I am still thinking and dreaming about our house or compound No. 99, Kyait Wyne Pagoda Road, 8 mile Mayangone. its still breaking my heart.